excel.2007 - MYSTERY ZILLION
September 2009 edited April 2010 in DTP
အကိုတို့ရေ....ကျွန်တော်က excel 2007 သုံးပါတယ်..ကျွန်တော်နားမလည်တာက print ထုတ်ရင်
bottom က အကျယ်ကြီးဖြစ်နေတယ်..အဲဒါတောင် bottom ကို ၀ ပေးထားတာ...page setup လုပ်နည်းကို အသေးစိတ် သင်ပြပေးပါခင်ဗျာ.....printer က MP-140 series canon ပါ....:((
piglay wrote: »
Page Layout Tab ရဲ့ Dropdown list ကိုရွေးပြီး Custom Margin ကိုရွေးပြီးကြည ့်လို့ရပါတယ်..
Print Preview မှာလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်..
အစ်ကိုတို့ရေ excel 2007 မှာ cell တစ်ကွက် ကနေ တစ်ကွက် ချိန်းရင်နည်းနည်းကြာနေလို့ပါ။
file ta file တည်းြှဖစ်တာပါ။ number တွေရိုက်ပြီးချိန်းရင်ကြာပါတယ် စာတွေရိုက်ပြီးချိန်းရင်မကြာပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ စာသားတွေကို စာရွက်ရဲ့အလယ်တည့်တည့်ထားပြီးထုတ်တာပါ။
1. Go to Print Preview => Click Page Setup button => Margin Tab
2. In Center on Page section, click vertically (and horizontally)
ကျေးဇူးပြုပြီး excel function တွေကို မြန်မာလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြ ပေးနိုင်
၇င် ကူညီကြပါအုံးခင်ဗျာ။ excel နဲ့ စာရင်းတွေတွက်ထုပ် ချင်လို့ပါဗျာ။
စာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြားsoftwear တွေရှိရင်လဲ ညွှန်ပြ ပေးပါ ခင်ဗျာ။
page setup ထဲက bottom Margin ပြင်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော် တွေ့ကြုံနေရတာက ဒီလိုဗျ။
Excel File တစ်ဖိုင်ကို Data ထည့်ပြီး Save လိုက်ရင် excel file ရှိတဲ့ folder မှာ မူရင်း Excel file အပြင် တခြားနာမည်နဲ့ file တွေ အများကြီး ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ :106:File type မှာတော့ File လိုပဲ ပေါ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဖွင့်ကြည့်ရင်တော့ excel file အနေနဲ့ ပွင့်တယ်ဗျ။
File နာမည်တွေက 0AA10100, 2D4EF000, 4D3EF000,4D58F000 စသဖြင့် ပွားနေတယ်ဗျ။
Update ဖြစ်တဲ့ data တွေကလည်း အဲဒီ file တွေထဲမှာပဲ ၀င်နေပြီး မူရင်း excel file မှာ Update မဖြစ်ဘူး ခင်ဗျ။ :2:
ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီ၊ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
Update ဖြစ်တဲ့ data တွေကလည်း အဲဒီ file တွေထဲမှာပဲ ၀င်နေပြီး မူရင်း excel file မှာ Update မဖြစ်ဘူး ခင်ဗျ။ :2:ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီ၊ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
အဲဒီကောင်က ဘာကြောင့်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တယ် ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်ရိပ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖြစ်တုန်းက Windows7ပေါ်မှာ Office 2007 သုံးပြီး Save လုပ်တဲ့အခါ 97 - 2003 နဲ့ Save လုပ်ချိန်မှာဖြစ်တာဗျ။ Excel တင်မကပါဘူး။ Word နဲ့လည်းဖြစ်တာပဲဗျ။ နောက်ဆုံးဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ 2007 အနေနဲ့ပဲ Save ပေးတော့ အဲဒီပြသနာ ရှင်းသွားတယ်ဗျ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတာတော့ တခြားသိတဲ့သူများ ပြောပေးကြမှာပါ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့၊ အခုလို ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်သုံးနေတာက Windows XP မှာပါ၊ Office 2003 ရော၊ Office 2007 နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ဖြစ်နေတာပါ။ သိရှိသူများ ဖြေပေးပါခင်ဗျာ။
တွေ့ကြုံဖူးသူ၊ သိရှိသူများ ဖြေကြားပေးကြပါခင်ဗျာ။
အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် ဒီလိုစမ်းကြည့်ပါလားဗျာ။ ၂၀၀၃ နဲ့ ၂၀၀၇ နှစ်ခုတင်မထားနဲ့ဗျာ။ ၂ခုလုံးပြန်ဖြုတ်။ ၂၀၀၇ တစ်ခုပဲတင်ထား။ သိမ်းရင် ၂၀၀၇ အနေနဲ့ပဲသိမ်း။ အဲလိုစမ်းကြည့်ပါလားဗျ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ဗျ၊ Office 2003 နဲ့ 2007 နှစ်ခုလုံးတော့ တင်မထားဘူးဗျ။ File save ရင် 2003 format နဲ့ပဲ save တယ်ဗျ။ Office 2007 ထက် Office 2003 မှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို ဖိုင်ပိုပြီးပွားတာတွေဖြစ်နေတာဗျ။
ကျေးဇူးပါ။ စိတ်ပါ၀င်စားပြီး အကြံပေးတဲ့အတွက်
ကိုazure ရေ စိတ်ပါ၀င်စားဆို ကျွန်တော်လည်းအဲဒီပြသနာတက်ခဲ့တာဗျ။ ၂၀၀၇ နဲ့ သိမ်းတော့ ၂၀၀၃ format အဲဒီအချိန်မှာ။ Save ကလုပ်လို့မရ။ နာမည်ပြောင်းပြီး Save လုပ်ရင်တော့လုပ်လို့ရတယ်။ ဒီအတိုင်းပိတ်လိုက်တော့ Temp ဖိုင်တွေပွားလာတယ်။ 2007 Format နဲ့သိမ်းလိုက်တော့ အဲဒီပြသနာ ကင်းသွားရော။ လောလောဆယ်ပေါ့ဗျာ။ ဘယ်အချိန်ပြန်ဖြစ်ဦးမလဲတော့ မသိဘူးဗျ။ အဲဒီပြသနာကျွန်တော်လည်းစိတ်၀င်စားတယ်ဗျ။ တခြားသိတဲ့သူများလည်း ပြောပြကြပါဦး။
powerpointမှာ background design ko